နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃ | NAB သတင်းများ | 2017 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » နိုဝင်ဘာလ
လစဉ်မော်ကွန်း: နိုဝင်ဘာလ 2017
Caringo ရဲ့ swarm Hybrid ကိုတိမ်တိုက် Object ကိုသိုလှောင်ပလက်ဖောင်း Now ကိုရောအင်ဂျင်နှင့်အတူပေါင်းစည်း Azure ကျော်လွန်. နှင့် Microsoft Levels နဲ့အားဖြင့်
Caringo မကြာသေးမီကအသိဉာဏ်အကြောင်းအရာပလက်ဖောင်း ကျော်လွန်. နှင့် Microsoft Azure မှအဆင့်အားဖြင့်ရောအင်ဂျင်နှင့်အတူ၎င်း၏ swarm Hybrid ကိုတိမ်တိုက် Object ကိုသိုလှောင်ပလက်ဖောင်းများ၏ပေါင်းစည်းမှုကြေညာခဲ့သည်။ ရောအင်ဂျင်နှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှုဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသေချာနေဖြင့်အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြတိုက်မှူးတစ်ခေတ်သစ်ပါဝါဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်လုံလုံခြုံခြုံထိန်းသိမ်း, ခြေရာခံများနှင့်လျင်မြန်စွာချုံ့ချဲ့နေစဉ် On-demand ချက်ချင်းရရှိနိုင်ပါ ...
ICS ပြတ်တောက်မိတ္တူ, သိမ်းယူမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Solutions ၏နယူးလိုင်းတိုးချဲ့ခြင်းမှ JMR အီလက်ထရောနစ်နှင့်အတူရောနှောပေါင်းစပ်သွားလေသည်
အသိဉာဏ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် Solutions Inc ကို (ICS) disk ကို drive ကိုပုံတူနှင့်ကွန်ပျူတာမှုခင်းစနစ်များ၏ရှေ့ဆောင်ခေါင်းဆောင်, ယခုအပတ် JMR အီလက်ထရောနစ် Inc ကို (JMR), အရွယ်မှာဒေတာသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးဆောင်ပေးသူနှင့်အတူ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်အတူဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရတဲ့ disk ကို drive ကိုပုံတူနှင့်ကွန်ပျူတာမှုခင်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ၌တည်စျေးကွက်ကြီးစိုး၏ ICS ရဲ့ 27 နှစ်ပေါင်းပေါင်းစပ် ...
အခမဲ့နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ VR / AR, HDR နဲ့ AI Technologies က Explore မှ ASG
EMERYVILLE, ကာလီဖိုးနီးယား။ - အဆင့်မြင့်စနစ်များအဖွဲ့ (ASG), တစ်ဦးဦးဆောင်မီဒီယာနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီနယူးပြည်သူ့ရုပ်ရှင်ရုံမှာဒီဇင်ဘာလ 7, 2017 အပေါ်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစဉ်အတွင်း VR / AR, HDR ၏အသုံးပြုမှုကိုလေ့လာစူးစမ်းနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုနည်းပညာများပါလိမ့်မယ် San Francisco မှာ။ "ဒီ VR / AR ၏ Reality, HDR နှင့် Artificial Intelligence", ထိုနည်းပညာများကိုများ၏နည်းပညာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးရှုထောင့်နှစ်ဦးစလုံးဖြေရှင်းရန်ပါလိမ့်မယ် ...
LynTec ရဲ့ NPAC WFX 2017 မှာနယူးကုန်ပစ္စည်း Award ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိ
LENEXA, ကံ - ။ နိုဝင်ဘာ 30, 2017 - LynTec, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်အလင်းရောင်စနစ်များများအတွက်ဆန်းသစ်လျှပ်စစ်ပါဝါကိုထိန်းချုပ်ဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, အ NPAC Dallas ရှိ WFX 2017 မှာနယူးကုန်ပစ္စည်း Award ဆုနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုကြေညာခဲ့သည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်အကောင်းဆုံးအဆောက်အဦး Automation သို့မဟုတ်စနစ်အမျိုးအစားအတွက်အကောင်းဆုံးအဆောက်အဦးစနစ်များကုန်ပစ္စည်း၏ဂုဏ်အသရေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အသစ် ...
Lawo mc²56အသံစက်များဟာဇူးရစ်နဲ့ Opera House က Upgrade
အဆိုပါဇူးရစ်နဲ့ Opera House ကအဆိုပါ 56-2017 အော်ပရာနှင့်ပြဇာတ်ရုံရာသီအတွက်ဘုတ်အဖွဲ့ရောစပ်အလွန်အဆင့်မြင့် Lawo အိုင်ပီmc²2018နှင့်အတူအသံထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်ခနျးအာကာသနှစ်ဦးစလုံးကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်။ အသစ် Lawo ရောစပ်ပျဉ်ပြားခန်းမ console နဲ့ 48-fader ရှေ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ 32-fader သွယ်တန်းအတူ 16-fader console ကိုအတူလျှောက်ထိန်းချုပ်ခန်း၌ 16 faders ပူဇော် ...
"ဒီမြည်းစမ်း" မှာလှုပ်ရှားမှုအတွင်း Wisycom
ဂျာမနီနိုင်ငံမြူးနစ်, နိုဝငျဘာ 30, 2017 - SAT.1 ချက်ပြုတ်ပြပွဲ "ဒီမြည်းစမ်း" Wisycom, ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးခေတ်မီ RF ဖြေရှင်းချက်၏ဆောက်ထံမှကြိုးမဲ့စနစ်များစွမ်းအားဖြင့်ယင်း၏ပဉ္စမရာသီဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ Redseven / ProSiebenSat.1 အစီအစဉ်ကို "ဒီမြည်းစမ်း" တီဗီ Skyline အားဖြင့်မြူးနစ်-Grünwaldအတွက် Bavaria ၏စတူဒီယိုတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့သည်။ Andreas အယ်လ် Hain, တီဗီ ...
Dalet ဂျပန်နယူးဖြေရှင်းချက်ဗိသုကာခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းနှင့်အတူမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Professional ကန်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့
နိုဝင်ဘာလ 30, 2017 - - Reona Yanagishita, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာပုံစံဒီဇိုင်းနှင့်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဗိသုကာအတွက်ကျွမ်းကျင်သူ, တိုကျိုတိုကျို, ဂျပန်၌ကြီးထွားလာ Dalet အဖွဲ့ပူးပေါင်းမည် Dalet, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့များ၏ထို့အပြင်ထုတ်ပြန်ကြေညာ အဆိုပါ Dalet ဂျပန်အဖွဲ့ Reona Yanagishita ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမီဒီယာ Workflows အတွက်ကျွမ်းကျင်သူ, Yanagishita သည့် Pre-အရောင်း & သို့ခြေလှမ်း ...
CoreMelt ရဲ့ Black ကသောကြာနေ့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်သို့ရာတွင်ကျော်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်!
CoreMelt ရဲ့ကြောက်မက်ဘွယ် Black ကသောကြာနေ့ရောင်းချဒီဇင်ဘာလ 1st မှတဆင့်နေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်သင်ကျိန်းသေရွေ့လျားမှုတင်းပလိတ်များပေါ်တွင်သူတို့မယုံနိုင်စရာကမ်းလှမ်းမှု၏အားသာချက်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ် အဆိုပါ VFXMarket အပိုင်း 50 ဖက်ရှင်ကိုအတိအကျရှာရန်နှင့် feature ကြောင့်သူတို့ရဲ့ collection များကိုချွတ်%, နည်းပညာ, Real Estate များနှင့် retro ပုံစံနှင့်ရုပ်ပြကလောင်နဲ့မှင်အတွက်မင်္ဂလာဆောင် features! ဒါ့အပြင် CoreMelt ရှိရပ်တန့်မပေးပါ။ အားလုံး CoreMelt plugins ကိုလက်ခံရရှိ ...
1 ၏စာမျက်နှာ 8912345 » 102030...နောက်ဆုံး»